7 Waa Inuu-Daawadaa Filimku Wuxuu Muujinayaa Sida Dareenka Franxx - Kale
Hadaad Jeceshahay Jacaylka Franxx, Kuwani 7 Anime waxay muujinayaan haraadkaaga
Mecha iyo Sci-FI maahan mowduuca ugu xiisaha badan. Xitaa nooc ma ahan waxaan ahay taageere weyn oo naftayda ah. Iyo bulshada anime ma siiso wax F ku saabsan sidoo kale sidoo kale.
Laakiin mar uun, anime sida Darling In The Franxx tusi doonaa oo saamiga ku leh sheegashadiisa.
Iyadoo Sawirada A-1 kaasoo soo saaray Seef Farshaxan Online, iyo Kicin Studio yaa soo saaray Dil La Kill oo wada shaqeynaya, layaab ma leh Darling In The Franxx ayaa caan ku ah hadda.
Hadaad jeceshahay anime ilaa iyo hada, tixgeli daawashada kuwan 7 anime waxay muujineysaa isku ekaansho xoogan.
Haddii aan ka hadlayno:
Animation guud ahaan.
Naqshadaha hore iyo midabbada.
Iyo waxyaabo la mid ah…
Tengen Toppa Gurren Lagann wuxuu la wadaagayaa iskudhacyo adag Darling In The Franxx.
Sidaas darteed haddii aad jeceshahay Kicin, waad qadarin doontaa Gurren Lagann xitaa intaa ka sii badan.
2. Eebbe Cun
La sii daayay dabayaaqadii 2016, Ilaah Cun wuxuu la mid yahay Weerarkii Titan iyo Kabaneri ee Qalcadda Birta.
Marka maxaa ugu jira liiskan? Maxaa loo xusaa?
Dusha hoostiisa - God Eater wuxuu wadaagaa iskumid la mid ah Darling In The Franxx taageerayaasha badankood way jeclaan doonaan. Gaar ahaan tayada animation-ka, iyo 'xagjirnimada' vibes oo lagu muujiyey labada animes.
Oo ka duwan AOT, God Eater ma ahan mid ka sarreeya dusha sare ee xayawaankiisa dabiiciga ah, isaga oo ku sii haaya wax badan oo la jaan qaadaya sida Darling In The Franxx uu isagu wax u qabto.
La xiriira: Alaab Ganacsi Eebbe
3. Dila La Dila
Waad ogeyd inay soo socoto, sax?
Sida Tengen Toppa Gurren Lagann, Kill La Kill waxaa sameeya Studio Trigger. Iyada oo ay iskaga mid yihiin Darling In The Franxx oo leh muuqaal animation iyo dabeecad u gaar ah.
Xitaa astaamaha ugu muhiimsan ee labada bandhigba waxay dareemayaan wax yar oo isku mid ah.
Xiriirinta La Xiriira: Dila La Dila Figurines
Witchblade waa anime la ilaaway 2018, waana mid ka mid ah bandhigyada anime ee aan jeclaa.
Sida Darling In The Franxx, Witchblade waxay soo bandhigtay halyeeyo dumar ah oo lab iyo dhedig labadaba jecel. Oo waxaa jira qayb ka mid ah cilmiga sayniska oo lagu tuuray sheekada Witchblade sidoo kale.
Waxaan dhihi lahaa Witchblade waa anime-ka niyadjabka badan ee u dhexeeya labadooda inkastoo.
Code Geass wuxuu had iyo jeer ii noqon doonaa anime Mecha anime ah. Sheekada waa la cadeeyay, jilayaasha ugu waaweyn sifiican ayaa loo qabtay, ficilkuna waa naxariis daro.
Haddii aad aqoon u leedahay Zero Two oo ka socda Darling In The Franxx, waxay la wadaagtaa waxyaabo la mid ah C.C oo ka socda Code Geass. Lammaanaha ugu weyn ee Lelouch ee Code Geass.
Iyo ficilka labada anime ku filan inuu soo jiito xitaa haddii aadan taageere weyn u aheyn Mecha.
Sida Darling In The Franxx, shirqoolku wuxuu sii adkaanayaa inta badan ee aad ku dhex daadato sheekada Owari No Seraph.
Waxa kaliya ee ka reeban ayaa ah Owari No Seraph waa taxane jinni / khiyaali ah oo aan lahayn Mecha ama Sci-FI xubno. Laakiin yaanay kaa hor istaagin inaad daawato, maadaama ay tahay beddel wanaagsan.
7. Cabsi buuxda birta
Sida Code Geass, FMP waa mid ka mid ah taxanaha anime ee aan jeclahay. Waa sababta aan u bilaabay inaan jeclaado Mecha anime.
Rabshadaha, aalado waaweyn, mashiinno awood badan iyo jilayaal soo jiidasho leh ayaa la mid ah Darling In The Franxx. Oo wuxuu kugu siin doonaa jillaab.
Hase yeeshe digniin ayaa ah: FMP wuxuu ku bilaabmayaa xoogaa gaabis ah marka loo eego Darling In The Franxx. Waxyaabaha wanaagsan ayaa mar dambe soo gala taxanaha.
La xiriira: 6 Ka Mid Ah Qodobada Ugu Fiican Ee Birta Argagaxa Aad Jeceshahay
top 10 anime ugu fiican waqtiga oo dhan
taxane anime ugu fiican waqtiga oo dhan
anime ugu fiican waligaa ma maqal